🥇 aza ajụjụ na-arụ ọrụ n'ime ime obodo
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 292
Video nke aza ajụjụ na ime ọrụ
Dezie ajụjụ maka ọrụ dịpụrụ adịpụ
Accounttụle onye ọrụ ọ bụla mgbe ị na-arụ ọrụ nke ọma dị ezigbo mkpa n'oge a, n'ihi ọnọdụ ụwa, ndakpọ akụ na ụba, yana mgbanwe na ọrụ dịpụrụ adịpụ. Accountgụ ajụjụ maka ọrụ dịpụrụ adịpụ kwesịrị ịdekọ ego ole oge arụ ọrụ, ogo nke mmemme, na mpịakọta. Nchịkwa njikwa maka ọrụ dịpụrụ adịpụ adịghị mgbagwoju anya, yana obere isi ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ, mana mgbe ọ bịara n'ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike itinye ụdị ọrụ ọzọ na mgbakwunye ọrụ, ọ na-esiri ike ma dị egwu. Ime ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na kọmputa na-enye ohere ịhụ ihe ndị ọrụ na-eme kwa ụbọchị, na-enyocha ọnụọgụ nke oge elere na ogo ya na olu nke ọrụ a rụrụ, mana na enweghị sọftụwia pụrụ iche, ọ na-esiri ike nyochaa steeti izugbe. nke omume. Jiri usoro USU Software pụrụ iche ma zuru oke mee ihe, nke na-enyere ọ bụghị naanị na akụkụ mmepụta nke mmejuputa ụfọdụ ọrụ. Ọzọkwa, ọ na-ebuli oge ọrụ arụ ọrụ nke ọma, na-enyocha ọrụ nke ndị ọrụ oge niile, na-eweta akụkọ na eserese, na-egosipụta ngalaba ọrụ site na kọmpụta nọ n'okpuru, n'ụdị windo site na nyochaa igwefoto onyunyo vidiyo. Onye njikwa ahụ nwere ike nyochaa ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ nke ndị ọrụ, dị ka a ga - asị na onye ọ bụla nọ n'ọfịs, na - enyocha ọganihu na ogo arụmọrụ a na - arụ, na - agagharị na usoro iheomume nke ọrụ ndị a na - eme, na - ahụ ọrụ na nkwụsị, na - enyocha ụdị njehie n'ihi onye ọrụ nwere ike ịbanye na sistemụ ahụ na-enweghị gbanyụọ kọmputa ahụ, na-enye nghọta na ọ na-arụ ọrụ, mana n'ezie na-eme ihe gbasara onwe ya. Usoro nhazi usoro ihe omume na-enye ndị ọrụ niile otu ọrụ dịpụrụ adịpụ, na ọnọdụ ọtụtụ ndị ọrụ, na-enye ntinye na mmezu nke ọrụ e kenyere, na-enweghị ọdịda ịba uru, na-eji akaụntụ nkeonwe, abanye, na okwuntughe Na njikwa njikwa, a na-atụ anya ya ịkọwapụta ikike ndị ọrụ dabere na ọrụ ọrụ nke ndị ọrụ, ichedo ozi echekwara na sistemụ ozi jikọrọ ọnụ. Nweta akụrụngwa na ọrụ achọrọ dịpụrụ adịpụ, dịnụ na-echebara ojiji nke ihe nchọgharị gburugburu, na-ebelata oge ọchụchọ na nkeji ole na ole. Informationbanye ozi dị na akpaghị aka ma ọ bụ aka, na nghọta nke ndị ọrụ, na-eji isi mmalite na nkwado dị iche iche, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị Microsoft Office Word ma ọ bụ akwụkwọ Excel. A na-arụ ọrụ njikwa oge ọrụ ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ na-akpaghị aka, na-agbakọ ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke awa na ọrụ a rụrụ, nyocha ọganihu, iji atụnyere eserese, na ịgbakọ ụgwọ ụgwọ dabere na ọgụgụ ndị a. A ga-eziga data niile sitere na kọmpụta ndị ọrụ na njikwa usoro njikwa, maka nyocha na njikwa nke ịgụ na ọrụ a rụrụ, ịdekọ ndị ọrụ na ndị na-adịghị arụ ọrụ, jiri akara dị iche iche gosi ha, ịchọpụta ụdị njehie, njikọ poorntanetị adịghị mma. ma ọ bụ enweghị onye ọrụ n'onwe ya. Site na ịgbakọ ụgwọ ọrụ dabere na ihe akaebe, ndị ọrụ anaghị egbusi ha site na ịbawanye ogo na olu nke ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ, nke na-emetụta ọnọdụ nke nzukọ ahụ ozugbo.
Ntughari gaa oru di anya bu mgbanwe, ma na mmemme anyi enweghi ihe di iche, n'ihi na emeputara oru nile n’otu uzo ma dikwa nma karie, na-echebara njikwa, nyocha, na njikwa mgbe niile. Nwee ezigbo njikwa njikwa na njikwa site na ịwụnye ụdị ngosi ngosi anyị. Ndị ọkachamara anyị ga - enyere gị aka ị nye ndụmọdụ n'okwu niile, onye ga - ewebata gị maka njikwa njikwa maka ọrụ dịpụrụ adịpụ ma nyere gị aka ịhazi usoro na kọmputa niile.
Akpaghị aka software nwere ike adabara maka management-eme na aza ajụjụ maka ime ọrụ maka ihe ọ bụla nzukọ.
Onu ogugu nke kọmputa ejikoro ejighi oke, nyere otutu uzo di iche iche na oru. A na-enye onye ọrụ ọ bụla nnabata na okwuntughe nkeonwe. Nnyefe ikike ojiji dabere na ọrụ ndị ọkachamara, na-eme ka ntụkwasị obi na ogo nke ozi dị. Mgbe akwadoro, ihe ndị ahụ na-echebe ma gbanwee maka ogologo oge. Mgbe ịbanye, data abanye na ndekọ maka onye ọrụ ọ bụla, yana ụzọ ọpụpụ, ezumike, na ezumike nri ehihie. The atụmatụ nke dị iche iche ihe na-ewu nke oge ọrụ rụrụ na-akpaghị aka. Ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe nke kọmpụta dị iji kwado.
Ndị ọrụ na-enwe ike ịhụ ihe omume emepụtara, na-enwe ike ịbanye na nhazi oge ọrụ, na-edekọ ọnọdụ nke ọrụ arụchara arụ. Nkwado maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nke Microsoft Office akwụkwọ na kọmputa. All Mgbakọ arụmọrụ-akpaka. Settọ ntọala na ọrụ ya ka enyere onye ọrụ ọ bụla iche iche. Nyefee ihe dị na aka ma ọ bụ na-akpaghị aka. Mbubata data dị site na isi mmalite dị iche iche. Nweta data dịnụ, na-eburu n'uche ojiji nke igwe ihe eji achọ ihe. Ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ na kọmputa ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka. Lọ ahịa ahụ dị na mpịakọta na-akparaghị ókè. Họrọ chọrọ asụsụ mba ọzọ na modulu. Mmekọrịta na ngwa na ngwa dị iche iche, na ijikwa mmegharị ego niile, ijikọ na sistemụ USU Software na-akwado. Ikike iji hazie ma mepụta njiri mara njiri mara. Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, njikwa njikwa ga-agbanwe. Nọgide na-enwe njikọ dị n'otu na ozi zuru ezu na akwụkwọ. Site na nyocha nke nyocha na nke onu ogugu, onye njikwa nwere ike inyocha ihe oru a, lee uto na ojuju.